Madax-bannaanida, Kaniisadda Adduunka ee Allah Switzerland (WKG)
Immisa "is-samayn" ma ogtahay? Runtu, dabcan, waxay tahay in midkeenna uusan dhab ahaan isu sameyneynin. Waxaan nolosheena ugu bilownaa sidii dhibic yar oo ku jirta uurka hooyadeen. Waxaan u dhalannay si daciif ah haddii haddii nalooga tago qalabkeenna aan ku dhiman lahayn saacado gudahood.
Laakiin markii aan gaarno qaan-gaarka, waxaan u maleyneynaa inaan madaxbannaaneynno oo aan awoodno inaan keligeenna ku qaban karno. Waxaan sugeynaa xorriyad waxaan badanaaba ku fikirnaa in xornimada ay tahay in aan ku noolaano si kasta oo aan sameyno waxaan rabno.
Waxay umuuqataa inay adagtahay anaga aadanaha inaynu qirno runta runta ah ee aan ubaahan nahay caawimaad. Mid ka mid ah Qorniinka aan jeclahay ayaa ah: "Isaga ayuu ina abuuray ee ma ahan qudhiisa dadkiisa iyo ido aan daaqsintiisa daaqno" (Sabuurradii 100,3). Sida ay run u tahay hadana wali sida ay noogu adagtahay inaan qiranno inaan ka tirsan nahay - inaan nahay 'idihii daaqsintiisa'.
Mararka qaar keli ah dhibaatooyinka qandhada ee nolosha, marka ay goor dambe soo daaho, waxay umuuqdaan inay nagu dhiirigelinayaan inaan qiranno inaan u baahan nahay caawimaad - caawinta Ilaah. Waxaan u muuqanaa inaan ka fikirno inaan xaq u leenahay inaan sameyno waxa iyo sida aan u jecel nahay, laakiin nasiib darro annagu kuma faraxsana. Ku tagista jidkaaga iyo sameynta waxyaabahayagu ma keenayso dhammaystirnaan iyo raynrayn aan dhammaanteen dooneynno. Waxaan nahay sidii ido baadiyoobay, laakiin warka wanaagsan ayaa ah in kasta oo khaladaadkeenna waaweyn ee nolosha, Ilaah waligiis joojin maayo inuu na jeclaado.
Rooma 5,8: 10, rasuul Bawlos wuxuu qoray: “Laakiin Ilaah wuxuu ina tusiyaa jacaylkiisa uu inoo qabo xaqiiqda ah in Masiixu innaga u dhintay markii aan weli dembilayaal ahayn. Intee buu ka sii badbaadin doonaa cadhada haatan inaan xaq ku helnay dhiiggiisa, waayo, haddii Ilaah la heshiisiiyey dhimashadii wiilkiisa markii aannu weli cadowgan nahay, intee in ka sii badan buu yidhi? waxaan ku badbaadi doonnaa noloshiisa, hadda waa la heshiisiiyey. »
Ilaahay waligiis nama quusan doono. Wuxuu taagan yahay albaabka wadnahayaga oo garaacayaa. Waxaan kaliya u baahan nahay inaan albaabka ka furno oo aan u oggolaanno inuu soo galo. Eebbe la'aantiis noloshu waa faaruq iyo wax aan buuxin. Laakiin Ilaah wuxuu inoogu abuuray ujeeddadiisa ah inaan nolosha wadaagno - nolosha farxadda iyo nolosha buuxda ee ay wadaagaan Aabbaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah. Ciise Masiix, oo ah wiilka la jecel yahay ee Aabbaha, waxaynu ka kooban nahay xubno buuxda oo ka tirsan qoyska Ilaah. Ciise, ilaahay ayaa hore noogu sameeyay hantidiisa oo wuxuu inagu xidhay naftiisa jacaylkiisa si uusan waligiis noo ogolaan doonin. Marka maxaad u rumaysan weyday injiilka, oo aad xaggiisa ugu soo jeesataa iimaanka, oo iskutallaab ku qaad oo raac Ciise Masiix? Waa wadada keliya ee xorriyadda runta ah loo helo.